घर क्लासिक फुटबॉलर पल बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
LB पूर्ण स्टोरी को एक फुटबल भगवान प्रस्तुत गर्दछ जो सर्वोत्तम उपनाम द्वारा जानिन्छ; 'कालो मोती।'। Pele Childhood Story plus untold जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्म उल्लेखनीय घटनाहरु को पूर्ण खाता सम्म लाउँछ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनीहरूको बारेमा धेरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू धेरै र बन्द र अन-पिच भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ। हो, उहाँ मात्र फुटबलर हुनुहुन्थ्यो जुन प्रकृतिको सीमा पार भयो। अब थप adieu को बिना, सुरु गर्न।
Pele Childhood Story Plus Untold Biography Facts -प्रारम्भिक बचपन जीवन
एडसन एन्ट्रेन्स डो नासिमेन्टियो पनि पेले को रूपमा चिनिन्छ जुन ट्रेस कोरासेज, ब्राजिलमा जन्मेको थियो जोआओ रियोोस डोकोमाटोओ एएए डन्डोन्डो (बुबा) र श्रीमती सेलेस्टे एन्ट्रेन्स (आमा) द्वारा।
उहाँ शहरमा हुनुभयो Três Corações, राज्यमा मिनस गेरैस, लगभग 200 माइल उत्तर पश्चिमको रियो दि जेनेरियो। Pele Dondinho परिवारको पहिलो बच्चाको रूपमा जन्मियो। जन्मेको, आमाबाबुले उहाँलाई नाम दिए 'एडिसन ' आविष्कारक पछि थोमस एडिसन उहाँले पनि2बचपन उपनाम भएको हुनुभयो; "डिको र पेले"। उनको परिवारले उनलाई उपनाम दिए "डिको" त्यस्को मतलब 'योद्धाको पुत्र'। Pele's father, Dondinho को रूपमा पनि जानिन्छ पिचमा योद्धा को रूपमा धेरै द्वारा विचार गरिएको थियो। उहाँ बहादुर फुटबलर हुनुहुन्थ्यो।
उपनाम "पेल" विद्यालयमा आफ्ना कक्षाको साथीहरू आए। पेले खुशीको प्रकार थियो जसले साथीहरूलाई कठोर मन पराउँदैन र स्कूलमा मजाक बनाउन सक्दैन। जब पनि परेशान भए पनि उसले मुस्कुराउँथ्यो। तर त्यहाँ सीमित थिए। तिनका साथीहरूले आफ्नो खराब प्रशंसा गर्ने तरिकाहरूको फाइदा उठाए। त्यसपछि फेरि स्कूलमा, पेले आफ्नो मनपर्ने स्थानीय वास्को दा गामा गोलाकारको नामलाई उच्चारण गर्न प्रयोग भएको थियो 'बाईल' as "थुप्रो"। नाउँको घोषणा गर्ने उहाँको गलत तरिकाले उहाँका सहपाठीहरूलाई मजाक गर्न बनायो। त्यसोभए, उनीहरूले उहाँलाई उपनाम दिन निर्णय गरे "पेल" फुटबल समुदायको लागी यसको निन्दा को सानो ज्ञान संग। वास्तवमा, उनीहरूको सहपाठीले कहिलेकाहीँ यो सुनको नाम थियो। मजाकबाट दिइएको नाम। एउटा नाम जुन सबैभन्दा ठूलो भयो, 99.9% नाम भन्दा ठूलो पनि संसारले कहिल्यै थाहा छ।
एक साक्षात्कारको अनुसार, पेलले एक पटक भन्नुभयो कि नाम सुरुमा एक बेसारको बचपन उपनाम थियो, जुन उनले मनपराएनन्। कहिले सोध्दा किन? यो उहाँले के भन्नुभएको थियो ...
यो एक उपनाम म बच्चाको रूपमा चाहिएको थिएन। मेरो परिवारले मलाई डुको भनिन्, मेरो साथीले सडकमा मलाई एडसन भनिन्। जब तिनीहरूले मलाई पेले फोन गर्न थाले, मैले तिनीहरूलाई चाहँदैनन्। मैले सोचेँ कि यो कचरा नाम थियो। अब तपाईं यसलाई बाइबलमा पनि हेर्नुहुन्छ। हिब्रू पेलमा चमत्कार छ। एक धर्मशास्त्रले यो खोज्यो र त्यसपछि मलाई भन्नुभयो। यसको अर्थ, यसको त्यहाँ बाइबलमा।
त्यती बेला जब कसैले भने, "अरे, पेले," म फर्केर हिँड्छु र रिस उठ्दछु। एक अवसरमा मैले यसको कारणले एक सहनशीलतालाई पक्का गर्यो र दुई दिन निलम्बन कमाई। यो, अनुमान छ, वांछित प्रभाव छैन। अन्य बच्चाहरूले मलाई एहसास गर्थे र त्यसोभए तिनीहरूले मलाई पुर्नु पनि बोलाए। त्यसपछि मैले एहसास गरें कि यो के मैले मलाई बुझेको छैन। अब म नाम मनपर्छ - तर पछि फेरि यसले मलाई अन्त्य गर्दिन। "
Pele Childhood Story Plus Untold Biography Facts -उनको बहिष्कार ड्रीम
एक स्थानीय विमानस्थलमा आफ्नो घर नजिक दुर्घटना हुँदा पेलो र सबै यात्री बोर्डमा मारिएपछि पेलको बलात्कारको सपना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाले छोटो पायलट काटिएको थियो।
पेलले एक पटक आफ्नो घर छोडेर अस्पताल भर्ना गरिसकेका थिए र पायलटको कुर्सी देख्न थाले, उनले निर्णय गरे कि उनको केटाको सपना सपना बन्द हुनेछ। साँच्चै, उडान विमानहरूको क्यारियर उनको लागि थिएन।
भाग्यको रूपमा यो हुनेछ, उनको बुबाको पोषण स्वभावले फुटबललाई पनि विस्तार गर्यो, र डोन्डिन्हले पेलको पहिलो व्यावसायिक फुटबल कोच बन्यो। पेले आफ्नो बचपनको महत्वाकांक्षीको आमाको समर्थनलाई एक पेशेवर पायलट बन्न सहयोग गर्छ। उनी फुटबलको क्यारियरको रूपमा उहाँलाई देख्न खुसी भएनन्।
Pele Childhood Story Plus Untold Biography Facts -गरिबीबाट बढ्दै
तिनको परिवार गरिबीले घटेको थियो। आफैँलाई अचम्मको बच्चालाई पछाडि पार्नुहोस्। त्यसपछि पछि, उहाँलाई दिइएका जेब पैसाले फुटबल खर्च गर्न सकेन। एक केटाको रूपमा, पेलले कागजको साथ भराएको कुकको साथ खेल्न प्रयोग गरे जस्तै तिनले आफ्नो घरमा राख्न फुटबल किन्न सकेन। केही बिंदुमा, उनले ब्रेकमा दौड गर्दा मङ्गोलसँग खेल्ने खेल खेल्थे। नतिजाको रूपमा उहाँले धेरै पैसा तिर्नु भयो, पेलले बच्चाको रूपमा थप पैसा कमाउन विभिन्न अनावश्यक कामहरू गरे। उनले आफ्नो पिताबाट फुटबलमा प्रारम्भिक पाठ पाएका थिए र उनीहरूको जवानमा विभिन्न शौकिया टोलीका लागि खेले।
पेललाई ध्यान दिएर उनी लामो समयसम्म लागेनन् र उनी खेलको लागि अलौकिक प्रतिभाको साथ आशिष् दिइन्। उनले आफ्नो आफ्नै फुटबल शैलीको साथ सुरू गरे.यो उनले इन्डोर फुटबलको काम गर्दा आविष्कार गरे। त्यस बेला ब्राजिलमा इन्डोर फुटबल लोकप्रिय हुन्थ्यो।
पेल साँच्चै मात्र एकमात्र बच्चा थियो कि सम्पूर्ण राष्ट्रलाई हावामा पार्ने। यो तिनको डान्सबिलिङ थियो, क्षमता उत्तीर्ण, गति र लक्ष्य भण्डारण गर्ने क्षमतालाई रोक्न।
Pele Childhood Story Plus Untold Biography Facts -पारिवारिक जीवन
फेथर: Pele को पिता, जोआओ रियोस do Nascimento AKA Dodinho को2को 1917 मा पैदा भएको थियो। तिनी ब्राजीलियन फुटबल आक्रमणकारी केन्द्र अगाडि अगाडि थिए र केवल एक बुबा थिएन, तर उनको पुत्र, पेले को प्रशिक्षक र सबैभन्दा राम्रो मित्र थिएन।
पेले (बाँया) र बुबा, डोडिनो (दाँया)
डन्डोन्होले आफ्नो क्यारियरको दौडान केही सानो क्लबहरूको लागि खेले। तैपनि उनले आफ्नो छोरा जस्तै धेरै प्रभाव पारेन, उनले केहि गरे कि उनको पुत्रले आफ्नो पौष्टिक क्यारियरमा हराउन सकेन। तपाईं जान्नुहुनेछ जस्तो कि तपाईंले पढ्नु हुन्छ।
त्यसपछि उनको खेलिरहेको दिनमा, फुटबलमा कम से कम पेन्डर क्यारियर थियो। आदर्श रूप मा, फुटबलर देश को सबै गरीबहरु मध्ये थिए। यसैले, डन्डोन्हो गरीब थियो। उनले अन्य कामहरु देखि अधिक पैसा बनाउन को लागी प्रारम्भिक सेवानिवृत्त भयो। फुटबल सेवानिवृत्ति पछि, डन्डोन्न्हो अस्पताल क्लीनरको काम लिनुभयो जहाँ उनले आफ्नो छोराको क्यारियरलाई सहायता गर्न थप नगद बनाए।
डन्डोन्होले सिक्न सिकेका थिए कि कसरी सही ढंगले पारित गर्न, डर्बल कला प्रदर्शन गर्नुहोस्, मर्मतका लागि रक्षकहरू छोड्नका लागि क्यान्ट फिट प्रयोग गर्नुहोस् र छिटो गतिलाई आउटमेनसेउभरमा परिवर्तन गर्नुहोस्। र फुटबलको टेक्निकल पक्ष भन्दा माथि र पेलले केही कुरा सिके। उनले आफ्नो बुबासँग समय बिताउँदा एक वास्तविक मानिस कसरी सिक्न सिके। जवान पछाडि फर्केर अघिल्लो विनिमयबाट उनीहरूको बुबासँग जवान उत्साहित आनन्द र जुनून प्राप्त भयो। यसबाहेक, उहाँले आफ्नो बुबालाई आफ्नो राय गम्भीर रूपमा लिनुभयो, जस्तै त्यो एक मानिस थिए।
डन्डोन्हो वार्डमा काम गरिसकेपछि उनी प्रसिद्ध खेलाडीहरूको बारेमा सम्झना गर्थे र उनी आफ्नो बुबाको बारेमा कुरा गर्थे, जसले फुटबलको रूपमा असाधारण प्रतिज्ञा देखाए तर 25 मा मृत्यु भयो।
धेरैको क्यारियर अपूर्ण छ। यद्यपि हामी ब्राजिलको गहिरो फुटबल पिचहरूमा लगभग बाह्र वर्षमा जान्दछौँ, डोन्डिन्होले ब्राजीलका लागि 893 खेलहरूमा 775 बाहेक 19 खेलहरूमा6लक्ष्यहरू व्यवस्थापन गरे।
डन्डोन्हो एक क्लासिक नम्बर9थियो जबकि उनको छोरा पेल को संख्या 10 को रूप मा खेलायो। पेले एक गहिरो भूमिकाको लागि विकल्प छ, जहाँ उसले आक्रमणका साथ आर्केस्ट्रेट गर्न सक्दछ र अगाडि बढाउँछ।
अब यो रेकर्ड हो। डन्डोन्होले एक गोलमा एक गोलमा एक गोल गर्यो। Pelé यस अभिलेखलाई हराउन सँधै सताएको थियो तर कहिलेकाहीँ आफ्नो क्यारियरको माध्यमबाट बाहिर निस्कन सकेन। Dondinho लक्ष्यहरु को नेतृत्व मा अझै पनि एक अनौपचारिक विश्व रेकर्ड र एक विशेषता हो कि Pele आफु मा विश्वास गर्न सक्छ। यसको बारेमा सोध्दा, पेलले एक पल्ट भन्यो; "केवल ईश्वरले मेरो पिताजी कसरी गरे भनेर वर्णन गर्न सक्छ।"
Dondinho को प्रतिभा मात्र यहाँ उनको व्यक्तित्व को रूप मा भन्न सकिन्छ किनकि हामीले उनको पौराणिक पुत्र को बारे मा लिखते समय उनको याद छ 'Pele'। Dondinho 89 वर्षको लागि बाँच्यो। उहाँ साउ पाउलोमा 16 नोभेम्बर 1996 मा मर्नुभयो।
मातृभाषा: पेल एक अति प्रभावकारी आमा थियो जसलाई श्रीमती सेलेस्टे अन्न्टेस भनिन्छ। त्यो एक पटक पूर्णकालिक घर पत्नी बदल्न पहिले एक नौकर हो। यो सबै महान मानिसको पछि एक भन्दा बढि स्त्री हो भनिन्छ। यो मामला, यो ठूलो आमा हो।
"मेरी आमा एक शानदार महिला हो," ले भन्यो। "उहाँ सधैं मेरो परिवार र मेरो शिक्षाको बारेमा हेरिरहनुभएको छ, र उनले मलाई सिकाउनुभयो कि मान्छे कसरी आदर गर्ने। उनले मलाई मानिसहरूलाई कसरी आदर गर्ने भनेर सिकाउने मौका दिए। "
तिनीहरू धेरै नजिक थिए किनभने पेले उनको बुबाको नजिक थिए। एकदम राम्रो छ, उनको आमा सधैं जहाज मा थोडा पेले एक फुटबल खेलाडी बनेको थिएन। डोना सेलेस्टे, जो सधैं आफ्नो बच्चाहरु को लागि देख्यो, फुटबल दुवै को रूप मा देखा "मृत-अन्त खोज" र "गरिबीको लागि एक निश्चित बाटो।" उनले पेले आफ्ना अध्ययनहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्थे।
तिनी पेलका कंधेहरूमा बसिरहेका दूतजस्तै थिए, सधैं उहाँलाई सही, नैतिक, रचनात्मक कुरा गर्न उत्प्रेरित गर्दै। Pele को अनुसार, "ती प्रारम्भिक वर्षहरूमा, मैले मलाई फुटबल खेल्दै गर्दा, उनले मलाई राम्रो मौखिक पलायन गर्थे। र कहिलेकाहीं धेरै खराब! "
Pele Childhood Story Plus Untold Biography Facts -सम्बन्ध जीवन
उनको पहिलो विवाह 1966 मा रोसमीरी डिस रीईस चोलो संग थियो।
दुईजना छोरीहरूसँग जोडे। तिनीहरूले 1982 मा तलाक दिए। 1981 सम्म 1986 सम्म, उनले रोमान्टिक रूपमा Xuxa संग संलग्न थिए, जसलाई, उनले एक मोडेल बन्न सहयोग गरे। Xuxa केवल 17 वर्ष पुरानो थियो जब तिनीहरू मिति सुरु भयो।
1994 मा, उनले विवाहित मनोवैज्ञानिक र सुसमाचार गायक अश्याली लेमो साइक्सस। ब्राजिलको तर्फबाट रेसिफे ब्राजिलमा अप्रिल 30, 1994 मा एशेरिया सेक्सस लेसो संग उनको विवाह को समयमा उनको प्रसन्न अतीत को सम्झना गर्दा पेले ले आँसू पकाए।
170 राज्य प्रहरी भन्दा बढी जोडी र 300 अतिथिहरू एङ्गलोकन एपस्कपोलियन चर्चमा पर्यो। यो दुबैको लागि दोस्रो विवाह थियो। उनले जुत्ताहरू, यहोशू र सेलेस्टेलाई जन्म दिए। तिनीहरूले 2008 मा विभाजित गरे।
जुन 2016, पेले, 75, विवाहित मार्किया ब्राजिल, साओ पाउलो को तट मा Guaruja मा एक सानो धार्मिक समारोह मा।
सेवानिवृत्त फुटबल स्टार उनको विवाह6वर्ष अघि मार्किया संग सम्बन्ध भएको छ।
Pele Childhood Story Plus Untold Biography Facts -LifeStyle
जब यो जीवन शैलीको आउँदछ, पेलको केही विशेषता महसुस गर्न सकिन्छ। पहिलो, उहाँ चित्रका लागि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। तल 1970 मा एक मर्सिडीज बेंज को सामने एक स्टाइलिश पेले हो। उनको आकर्षक चित्र फिटिंग थियो, किनकि उनको ओल्ड-फील्ड प्लेले उनलाई उपनाम "ओ री पेले" कमाएको थियो, "अर्थ राजा पेलि।"
जीवन शैलीको कुरा गर्दै, अर्को बिन्दुको नोट लिन लायक छ। उहाँ आफ्नो गिटार बजाउन मन पराउनुहुन्छ। तल पिक्चमा, पेले मेक्सिकोमा 1970 विश्व कप पछि उनको गिटार संग होटल पूल द्वारा आराम गर्दछ। टूर्नामेंट उनको कानका लागि सङ्गीत थियो, ब्राजिलले तेस्रो विश्व कपको उपाधि जिते।
Pele Childhood Story Plus Untold Biography Facts -एक मिडिया लक्ष्य र राष्ट्रिय खजाना
मई 1963 मा बाथरूम मा धोने को समयमा पेले मुस्कान। उनी सबै ठाँउमा एक जना यात्रुको लक्ष्य थियो, त्यहाँ सबै भन्दा उत्कृष्ट फुटबलर बन्नु भयो।
ब्राजील सरकारले पेलेलाई 1961 मा एक आधिकारिक राष्ट्रीय खजाना को घोषणा को लागि उसलाई देश बाहिर स्थानांतरित गर्न को रोकन को लागि।
Pele Childhood Story Plus Untold Biography Facts -नेमारको लागि प्रेम
दुबै साथीहरू र अनावश्यक छन्। नेमारको अनुसार, "मेरो जीवनको मोटो बिन्दु थियो जब फुटबलको राजा, पेलले मलाई भनिन्। उनले मलाई चेल्सी स्नूब गर्न भन्नुभयो "। नेमार एक पटक किंवदंती संग खेल्नु भएको छ। Pele मानिन्छ नेमार रियल म्याड्रिडको सबै-समयका प्रमुख गोलकर्ता क्रिस्टियान क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई पार गर्न आफ्नो टाउको गर्ने क्षमतामा सुधार गर्न केवल।
Pele Childhood Story Plus Untold Biography Facts -सिभिल युद्ध बन्द आगो
पैसा रोलिंग राख्नको लागि, आंशिक रूपमा भुक्तान गर्न पेलको मजदूरी, आंशिक रूप देखि आफ्नो पुरस्कार सम्पत्ति देखि क्लब को लागि पैसा बनाउन को लागि, santos उनीहरूको घरको मूल्यमा उच्च प्रोफाइल मित्र मित्रहरू खेल्न विश्वको भ्रमण गरे। एक अनुकूल मा Lagos, नाइजीरिया मा दुई गुटहरु लाई प्रेरित गरे नाइजीरिया नागरिक युद्ध एक्सएनएनएक्सएक्स फायरफ्ल्यालाई कल गर्न को लागी उनीहरूले खेल खेल्न सक्दछन्। नाइजेरिया फेडरल र बियाफान विद्रोह सेनाहरूले पेललाई युद्धको डरलाग्दो राष्ट्रको भ्रमणमा खेल्न थाले। पिएलले पहिलो पल्ट नाइजीरियालाई हेर्दा अचम्म लाग्यो।
Pele Childhood Story Plus Untold Biography Facts -प्रारम्भिक क्यारियर र उपलब्धिहरू
जब 15 थियो पेले सान्टोसद्वारा हस्ताक्षर गरिएको थियो। सेप्टेम्बर 7, 1956 मा एफसी कोरिन्थीहरू विरुद्ध एक खेलमा उनले आफ्नो लेग पहिलोमा चार गोल गरे।
उनी आफ्नो जवानमा अनमोल थिए र 1958 ब्राजील राष्ट्रिय टीमले एक्सएनएमएक्सएक्समा स्वीडेनमाथि विश्वकप च्याम्पियनशिपको उपाधि जिते।
17 मा, पेल विश्व कप को सबै भन्दा सानो विजेता बने। उनले होम साइड स्वीडन विरुद्ध फाइनलमा पनि दुई गोल गरे। उनको पहिलो गोल थियो जहाँ उनले बललाई अगाडि पराजित गरे भटकाउने नेट को कोने मा, विश्व कप को इतिहास मा सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य को रूप मा एक को रूप मा चयन गरियो।
पेलको दोस्रो गोल पछि स्वीडिङ खेलाडी सिगर्ड पाल्लिंग पछि टिप्पणी हुनेछ; "जब पेलले अन्तिममा पाँचौं गोल बनाए, म ईमानदार हुनुपर्दछ र भन्न चाहन्छु कि मैले प्रशंसा गरे जस्तै"
यो 1958 विश्व कप मा थियो कि पेले नम्बर 10 संग जर्सी पहना शुरू गर्यो।
पेले पनि खेले दक्षिण अमेरिकी च्याम्पियनशिप। मा 1959 प्रतियोगिता उनी टूर्नामेंटको सर्वोत्तम खेलाडीमा थिए र 8 गोलका साथ शीर्ष स्कोरकर्ता थिए, र ब्राजिलले दोस्रो खेल खेल्न सकेनन्।
एक बहुमूल्य लक्ष्यद्वार, उनी क्षेत्रमा विरोधीहरूको प्रत्याशित गर्ने क्षमता र एक फुटबलसँग सटीक र शक्तिशाली शटका साथ संभावनाहरू समाप्त गर्नका लागि चिनिन्थे।
पेलको विशिष्ट शैलीको बजेट
सान्टोसमा, नोभेम्बर 19 उनको 1,000 लक्ष्य को सालगिरह मनाउन 'पेल दिवस' को रूपमा चिनिन्छ।
पेलको 1000 लक्ष्य मार्क
पेले 12 संग सबै समय विश्व कप गोर्खाहरूको सूचीमा पाँचौं र रोनाडोडो पछि दोस्रो उच्चतम राखिएको ब्राजिल।
जब पेल सेवानिवृत्त भए, संयुक्त राष्ट्रमा ब्राजीलका दूतावास जेबी पिनेरियोले भने: "पेलले 22 वर्षको लागि फुटबल खेलेका थिए, र त्यसबेला उनले कुनै पनि अन्य राजदूतको तुलनामा विश्व मित्रता र बिराटनगरलाई बढावा दिन सकेन।"
पेलले 92 टोपी-चालहरू बनाए, र 31 अवसरोंमा पाँच गोल गर्यो, छैटौं पटक पाँच, र एकपटक आठमा एक गोल गरे। र पेलेका धेरै लक्ष्यहरू साइकल किन्नका साथ रन बनाए।
पेले: साइकल किक मास्टर
पेलले आफ्नो क्यारियरको समयमा तीन वा बढी लक्ष्यहरू स्ट्यागरिङ 129 पटक बोलाइयो। 1 क्यारियर लक्ष्यहरू। 1, 280 मा 1, 360 खेलहरु। उहाँले टोपी चालका लागि विश्व रेकर्ड पनि राख्नुहुन्छ। 92 कुल मा। पेले कहिल्यै दण्डमा विश्वास गर्दैनन्। उहाँले एक पटक यसो भन्नुभयो: "एक दण्ड स्कोर गर्ने एक सहज तरिका हो।"
1997 मा, पेल को एक सम्मानित ब्रितानी को आठौं शताब्दी दिइएको थियो। उनी 1995 मा ब्राजिलको खेलकुदको रूपमा नियुक्त गरिएको थियो, जब सम्म 1998 सम्म सेवा गर्दै। उनले शताब्दीको एथलीटलाई 1999 मा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) द्वारा मतदान गरे। पेले 1999 मा राष्ट्रिय फुटबल हॉल ऑफ फेममा प्रवेश गरिएको थियो।
Pele Childhood Story Plus Untold Biography Facts -बेकार जर्सी
पेल न्यूयर्कका लागि खेलेपछि, धेरैका विरोधीहरूले उनको साथ शर्टहरू बदल्न चाहन्थे कि क्लबले प्रत्येक प्रतिवादीलाई प्रत्येक खेलाडिको एक शर्टलाई छोडेका थिए। "पेले मुख्य आकर्षण थियो," गर्डन ब्रैडीले भन्नुभएको छ, यो समयको क्लबको प्रशिक्षक। "कहिलेकाँही हामीले हामीलाई साथमा 25 वा 30 शर्ट लिनु पर्छ - अन्यथा, हामी कहिलेकाहीँ स्टेडियमबाट जिउँदैनौं।"
Pele Childhood Story Plus Untold Biography Facts -माराडोनालाई मित्र होइन
पेले र माराडोना शायद नै साथीहरू हुन्। 2010 मा, पेल Argentinian को भन्नुभयो: "उनी युवाहरूको लागि राम्रो उदाहरण होइनन्। उनी फुटबल खेल्न परमेश्वरले दिनुभएको उपहार थियो, र यसैले उहाँ भाग्यशाली हुनुहुन्छ। "
माराडोनाको प्रतिक्रिया: "पेल भन्छन् कसले के भन्छ? उहाँ संग्रहालयमा हुनुहुन्छ। "
पेल / माराडोना प्रतिद्वंद्वी
Pele 2006 मा भन्यो: "20 वर्षहरूको लागि तिनीहरूले मलाई सोही प्रश्न सोध्नु भएको छ, जो सबैभन्दा ठूलो हो? पेले वा माराडोना? म जवाफ दिनेछु कि तपाई सबैले तथ्यहरू हेर्छन् - कति दाँतहरू उनले आफ्नो दाहिने खुट्टा वा तिनका टाउकोसँग स्कोर गरे? "
Pele Childhood Story Plus Untold Biography Facts -संयुक्त राष्ट्रस्रोतको राजदूत
एक प्रवक्ता पनि एक एथलीट, पेलेले मई 23 मा फ्रान्स मा 1988 संग डिएगो मराडोना र माइकल प्लैटिन संग मेल खाने देखि पहिले नै मादबखत अभियान को प्रचार गरे। उनले पारिवारिक र पर्यावरणको लागि संयुक्त राष्ट्रका राजदूतको रूपमा सेवा गर्दै फुटबल पछि एक फरक बनाउन आफ्नो प्रसिद्धि प्रयोग गरे।
पेले: संयुक्त राष्ट्रको भलाईवाट राजदूत
पेलले युनिसेफ गुडवल एम्बुलर र संयुक्त राष्ट्रका राजदूतको रुपमा काम गरेको छ, जसलाई ब्राजिलमा भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्न काम गरिरहेको छ।
Pele Childhood Story Plus Untold Biography Facts -एक भिडियो गेम उहाँलाई पछि नामकरण गरिएको छ
पेल उनको पछि नामित एक भिडियो गेम थियो जसमा 'पीले फुटबल' भनिन्छ 1980s मा। एटारी 2600 को लागि यो एक फुटबल खेल र धेरै संभवतः सबैभन्दा पुरानो सेलिब्रिटी टाई-इन भिडियो गेम। खेलले तपाईंलाई दक्षिण अमेरिकामा गोलहरू दिन्छ।
पेलको फुटबल खेल
यसलाई खेल्न, तपाइँ पहिले ब्राजीलका सडकमा सुरू गर्नुहुन्छ, र गोल्फर चलाउन चाल पछाडि प्रदर्शन गर्नुहोस्। त्यसपछि, ठूलो सहरमा तपाईंको बाटोमा नयाँ इलाकामा यात्रा।
Pele Childhood Story Plus Untold Biography Facts -उनको बूटलाई बढावा दिँदै
मेक्सिको '70 को समयमा एक खेल मा किक गर्न को लागी, पेले को रेफरी को संकेत दिए कि उनलाई उनको ठाँउ बाँधने को आवश्यकता हो। क्यामेराहरूले अगाडि बढेको प्युमा जूताहरू प्रकट गर्न प्यान्डर - कम्पनीले पछिल्ला ठूलो बिक्री बढायो।